Rudzi: Home uye Family
Mudziviriri weZuva reMadzibaba munyika medu akachinja kuita Zuva reVarume. Isu tinoshandisa Kukadzi 23 kuti tipe zvipo zvakanaka kuvarume, zvisinei kuti vakaita here muchiuto. Uye…
Vanhu vazhinji vanochengeta zvipfuyo zvakasiyana kumba. Iyo budgerigar yakajairika. Tsananguro yevana inoratidzwa zvakadzama, iine mifananidzo yekutsanangura zvakajeka kuti ishiri rudzii. Kuchengeta pamba zvakakosha kuti uzive ...
Toast pamubatanidzwa wekambani - yakawanda yakatendeka mumashoko ako pachako
Chii chinonzi toast paparty party? Yakataurwa mumashoko ake ega, dzimwe nguva inoshanduka kuita show chaiyo. Kutaura kunofanirwa kugadzirirwa pachine nguva. Iko kugona kutaura mazwi mashoma mu maikorofoni pane veruzhinji, pakati pevatinoshanda navo ...
Munguva yekubata, amai vane tarisiro vanonyanya kufunga nezvehupenyu hwavo. Nekudaro, izvi hazvigone kununura bonde rakanaka kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana nezvirwere. Kazhinji, vanaamai vanotarisira vanotarisana ne ...
Vanhu vazhinji, vasati vawana imbwa, vanouya nemazita pamberi, edza kufanotaura maitiro. Uye panguva imwecheteyo, munhu wese anoda kupa chipfuwo zita remadunhurirwa rekutanga uye risingakanganwike. Zita remadunhurirwa rinotonhorera imbwa ndi ...
Kune zvakawanda zvinonakidza zvevana munguva yedu. Mune ino chinyorwa, iwe uchaunzwa kune yakaoma bhora madziva. Iwe uchazoona izvo zvakanakira yakadaro nzvimbo yekutamba ine. Uyezve uone kuti yakawanda sei ...
Boka repakati rekireshi rinopinda nevana vane makore mana ekuberekwa. Vadzidzi vakadaro vanonzwisisa hukama huripo pakati pezvidzidzo. Mukuita, vanoedza kuratidzira zviito zvevakuru. Kana pakaoma mamiriro ezvinhu, vana vakazvimiririra vanoedza ku ...
"Felix" (chikafu chekati): wongororo dzevatengi uye vezvechiremba
Vazhinji varidzi vevhudzi vane hura vanosarudza kufudza katsi, katsi uye katsi nezvikafu zvakagadzirira-kudya. Nhasi pamusika weRussia pane zvakawanda zvigadzirwa kubva kune vakasiyana vagadziri, uye chimwe chazvo ikati ...
Kana iwe uine imbwa yerudzi urwu, iyo inoda kugara yakashongedzwa, ipapo iwe uchazoda yakakosha clipper. Kunyangwe kana chipfuwo chako chiri mushanyi kune yakasarudzika salon, ndiko kuti ...
Wide Maslenitsa, Krivosheyka, Pancake, Obyeduha, Maslenaya svondo - iri izororo rimwe chete uye rinopembererwa rinenge rese pasirese. Zvinoreva zororo iri kusiyanisa nguva yechando neyechirimo ...
Vabereki vanogara vachinetsekana nekumisikidzwa kwakakodzera kwenzira dzehutsanana, kusanganisira kugeza, kusuka uye kurapa nhengo dzekunze dzekunze dzemwana achangozvarwa nehupfu, mafuta ekuzora kana mafuta. Ganda remucheche rakaomarara, mukushaikwa kwakakodzera ...
Chirwere chefemu yekufema, icho chinoguma stenosis yeiyo larynx, inonzi croup musainzi yekurapa. Ichi chirwere chinoperekedzwa nezviratidzo zvinotevera: ruzha kupererwa nemweya wekufema, hoarseness, "kuhukura" kukosora, kufema kwekufema. Croup yemwana - ...
Kindergarten zita reboka - kusarudza sei?
Zita reboka iri mukireshi rakakosha kwazvo. Vakuru vese nevana vanonyanya kufarira kana pachinzvimbo cheyakajairwa "boka diki" kana "boka Nha. Ipapo munhu akazvimiririra anoonekwa. Huya nepfungwa ...
Iyi nzira yekuzivisa mhuka yakashandiswa kwenguva yakareba mune zvekurima uye zvipfuyo zvemumba, uye kunyangwe mumhuka dzesango. Iyo yekupedzisira inoita kubata kwakadaro kuitira kuti ifunde kutama. Mukurima, vanomaka ...
Iyo isina-bvudzi-toyi terrier idiki muhukuru. Asi iye - akazara mumiriri werudzi rwake. Hazvinetsi kuchengeta imbwa iyi, sezvo toy toy terrier iri diki, inorema paavhareji 2 kg, iri pasi pe ...
Yakagara ichitendwa kuti katsi dzine maziso akasiyana dzinounza rombo rakanaka kune varidzi vadzo. Masayendisiti akakavadzana kwemakore pamusoro pekuti chii chakasarudzika uye dzimwe nguva chinotyisa chinotyisa chakabatana. Vamwe vakapokana ...
Kutanga aquarists kazhinji vanosangana nematambudziko mazhinji. Pazasi peiyo akwariya inokurumidza kuzadza silt, mvura inoshanduka kuita girini, hove dzinodhura dzinorwara uye kufa. Iwe haugone kuita pasina zano rehunyanzvi pano. Uye mumwe wavo ...
Imbwa greyhound imbwa imbwanana idiki, inoyevedza uye inoyevedza ine hunhu nyoro uye inowirirana zvakanaka nevana, kunyangwe vacheche. Mhuka dzinonyara, saka zviito zvisingatarisirwi zvichateverwa nemhinduro yekukurumidza. Italian greyhound ...
Zvekuita zvemuviri kune wese munhu zvinofanirwa kuve zviripo muhupenyu chaizvo kusvika padanho kuti zvakakosha kuti muviri uchengete hutano mamiriro uye chimiro. Nguva yefundo yemuviri mureshi ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,668 masekondi.